Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay dileen tiro badan oo Shabaab ah oo ay ku jiraan Ajaanib. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay dileen tiro badan oo Shabaab ah oo ay ku jiraan Ajaanib.
Milatariga Soomaaliya ayaa sheegay inay dhawr iyo todobaatan ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil ajnabi ah lagu dilay dullaanka lagu hayo shaldhigyadooda ku yaalla gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Dhawr dagaal ayaa laga soo weriyay aaggaga ciidamadu isku hor fadhiyaan ee Bacaadweyn iyo Camaara. Shalay galinkii dambena duqeyn xagga cirka ah ayaa lagu qaaday saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin Qaycad oo qiyaastii 8 km u jirta Bacaadweyn.
Taliyaha Ciidamada Dhulka ee Soomaaliya Jenaraal Maxamad Tahliil Biixi oo hogaaminaya duullaanka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Mudug oo waraysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa sheegay inay ku dhaw yihiin sow afjarida wajiga koowaad ee dullaankooda.
Jenaraal Tahliil waxa kale oo uu sheegay in dagaalkaasi ka socda qaybo ka mid ah gobalka Mudug uu dowr ku leeyahay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Jenaraal Saadaq Joon.